Kanaan alatti daandii haaraa hundeessuunis ta'e irra deddeebi'uun sirrii akka hin taanee fi mootummaa Waaqayyoo akka nama dhabsiisu Qulqulluun Phaawolos barreesseera. (Hundee daballee hin hundeessinu..Ibr 6:2, 1Qor 3:10, Bifa amantii qabu garuu humnasaa gananiiru...2Xim.3:5). "Sossobbaa Diyaabiloos mormuu akka dandeessaniif meeshaa waraanaa Waaqayyoo uffadhaa, lolli keenyi dhiigaa fi foon waliin miti." jedhee kitaabni Qulqulluun nu akeekkachiiseera (Efe 6:11).
Akkuma mul'achaa jirutti, namoonni muraasni walitti qabamanii habjuutiin nutti mul'ate jedhanii maqaa moggaasanii amantiin keenyi isa dhugaadha Kiristoos nubira jira jedhanii kan dandiirraa nama kaachisan hedduun ni jiru. Gooftaan keenyi Iyyasuus Kiristoos dursee waan kana beekuuf "Hanga dhumaatti kan cimee dhaabbate ... inni ni fayya" Mar. 13:13 jedhee kan dubbatee tures akka of eeggannuufidha.
Kanaafuu akka bara abbootii keenyaatti “amantaan kee maalidha?” yommuu jedhamnee gaafatamnu “amantaa abbaa fi haadha kooti” jennee deebisuun qofa gahaa miti. Akkuma Qulqulluun Phaawuloos jedhetti, yeroon kun yerootti waa'ee amantaa keenyaa sirriitti hubannee namoota kaaniif ibsuu danda'uu qabnurraati argamuutu nurraa eegama. Sababni isaas bara kanatti namoonni kitaaba Qulqulluu kaayyoo addadaaf jedhanii yerootti dubbisanii nama dogongorsiisuu barbaadan waan ta'eefidha.
Egaa dhimmi armaan olitti ilaalle kun Mana Kiristaanaa Kiristoos hundeesse, amantiin ishee dhugaa kam akka taate hubachuuf seenaan Mana Kiristaanaa gumaacha guddaa waan godhuufidha. Seenaan, kaleessa hanga har’aati kan jiru waan nu hubachiisuufidh. Ta'iiwwan adda addaa bara addaatti maal akka ta'n amantaa waliin akkamitti akka walitti dhufan kan hubachiisudha. Dhaabbileen amantaa amma jiran hundi yoom, eenyuun, akkamitti, akka hundaa'an, kaayyoon isaaniis maal akka ta'e kan nu hubachiisudha. Manni Kiristaanaa keenyi, Ortodoks Tawaahidoon akkamitti Kiristoosiin hundooftee, maqaa kanaan waamamuu akka dandeesse, qormaatilee hedduu dabarsitee akkamiin akka as geesse,akka addunyaatti biyyoonni Ortodoks Tawaahidootti amanan warra kam akka ta'anii fi kkf kan itti eeraffamu dha.
Barreeffamni kun of keessa qabiyyeewwan gosa adda addaa kan of keessaa qabu yoommuu ta’u haalli dhiiyenya isaas duraa fi duubaan kan dhyaatudha. Kana jechuunis, amantii ykn daandiin ishee Waaqayyo dhallii namaa ittin jiraate mootummaa Isaa ittiin dhaalan, akkamittii fi yoomii kaasee akka eegalte, walitti dhufeenyi Waaqayyoo fi dhala namaa maal akka fakaatu kanitti ibsamu dha. Waluummaagalatti barreeffama kana keessatti barootan sila caaqafne keessatti seenawwan Mana Kiristaanaa keenya gaababsinee kan ilaalu yoo ta’u bu’awwan afuuraafi foonii isheen biyyaaf argamsiftees ilaaluuf ni yaalla. Barreeffama kana kan adda isa godhus seenaa Manni Kiristaanaa akka Oromiyaatti qabdus qoronnoorratti hundaa'udhaan dhiyeessuuf yaalusaati. Sababni isaas, Oromiyaa keessatti Gadaamiwwan hedduun nijiru, seenaan hedduun ni jira, garuu walitti qabamee uummataaf hin dhiyaanne.
Walumaa galatti, namni seenaa Mana Kiristaanaa isaa kan hin beekni calliseetu oofama jechuudha. Yeroo qilleensi shakkii kallatti adda addaan itti dhufu dafee raafama, dhumnisaas dhaabbata amantaa isa dura shakkaa ture keessatti argamuu ta'a. Kunis akkuma namicha manasaa chirracharratti ijaarrateetti fakkeeffama. Namni seenaa Mana Kiristaanaa sirriitti hubatemmoo, qilleensi shakki garamiinuu otuu qilleensa'ee, qormaanni hedduun otoo itti dhufee yeroof dhiphata malee daandii ishee dhugaarraa kan isa kaachisu hin jiru. Kunis, namicha manasaa isa kattaa/dhagaa irratti ijaarrate fakkaata.
Egaa kaayyoon barreeffama kanaa, namoonni hundumtuu seenaa Mana Kiristaanaa sirriitti hubatanii dhugaa fi soba addaa baafatanii, daandii ishee duraa taate beekanii akka ittiin jiraataniif gumaacha guddaa akka qabu nan amana. Yaada qabaattanis bakka yaada itti kennuuf qophaa'e irratti akka nuuf ergitan nan abdadha. Waaqayyo, daandii dhugaarra deddeebinee lubbuu keenyaaf fayyina akka argannuuf nu haa gargaaru.
Galanni Waaqayyo Abbaaf, Ilmaaf, Afuura Qulqulluuf haa ta'u. Ameen.